Ramla Cali oo looga adkaaday ciyaartii feerka ee Olympicada Japan | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ramla Cali oo looga adkaaday ciyaartii feerka ee Olympicada Japan
Ramla Cali oo looga adkaaday ciyaartii feerka ee Olympicada Japan
Ramla Cali oo ciyaaraha feerka ee hablaha ku meteleysay Somaliya, tartanka Olympicada ee ka soconayo Magaalada Tokyo ee dalka Japan ayaa looga adkaaday ciyaartii feerka, ee ay maanta ku wajahday Maria Claudia Nechita, oo ka socotay dalka Romania.
Ciyaarta feerka oo ciddii laga adkaadaa ay tartanka isaga hareysay ayaa shan dhibcood iyo waxba (5-0) waxaa ay guusha ku raacday Maria Nechita.
Ramla Cali oo noqonayso gabadhihii ugu horeysay ee Somaliya ku metesho ciyaarta feerka ee Olympicada adduunka ayaa muujisay dadaal iyo firfircooni, waxaana laga dheehan karay inay aad u deganeyd, iyadoona isku dayeysay inay meelo muhiim ah feerka kaga dhufato gabadhii ay feertamayeen, inkastoo aad mooddo in xagga weerarka looga gacan-sareeyay.
Feerkan ayaa feerarka kale ee dunida laga ciyaaro, sida kan miisaanka culus oo kale waxaa uu kaga duwan yahay, iyadoo ciyaaryahanka loo xisaabiyo dhibco, lagu saleynayo meelaha uu feerka kaga dhufto ciyaaryahanka kale iyo habka uu isaga caabiyo weerarka kaga imaanaya.
Faadumo Cali Nuur oo hoggaamineysay ciyaartoyda Somaliya ee ku sugan dalkaasi Japan ahna Gudoomiye Kuxigeenka 2aad ee Guddiga Olombikada Soomaaliyeed ayaa Ramla ku ammaantay inay soo bandhigtay ciyaar wanaagsan.
“Ramla Cali wax weyn oo hadda aan dhihi karo waa looga adkaaday ma jirin, laakiin nasiib baa looga adkaadaa dhihi karaa. Way dadaashay, qaybtii 1aad iyo tii 2aad ee ciyaarta, si fiican bayna u ciyaartay, qaybtii 3aad ayaa xoogaa meelo laga taa-taabanayay, sidaas ayaa looga dhibco batay.” Ayay tiri Faadumo Cali oo la hadashay VOA.
Faadumo Cali ayaa xustay inaanay ciyaar kale u harin Ramla, oo ciyaaryahankii laga adkaadaa uu isaga harayo tartanka, iyadoona tiri “Ciyaar kale uma harin, qofkii laga badiyaa waa harayaa.”
Somaliya ayaa waxaa u harsan tartanka orodada ee 1500 mitir, oo 3-da bisha soo socoto ee August uu u ordi doono Cali Iidow Xasan.
Previous articleQarax ka dhacay Gobolka Hiiraan oo askar ay ku dhimatay
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo u ambabaxay Magaalada London